यो प्रश्न विदेशी भाषा सिक्न लगभग हरेक व्यक्तिको रुचि छ।
मोबाइल LingoCard आवेदन को पहिलो संस्करण को सफल विकास पछि यसको सार्वजनिक प्लेसमेंट र पहुँच को आसानी, ऐप ले दसियों को प्रयोगकर्ताहरु लाई प्राप्त गरे।
तर कुन भाषा अभ्यास? हामीले सोचे - किन हामी सबैलाई एकताबद्ध गर्दैनौं कि उनीहरूको आफ्नै मूल भाषामा कुराकानी गर्न र एक-अर्कालाई सहयोग गर्न।
नतिजाको रूपमा, हामी एक अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्लेटफार्म सिर्जना गर्ने विचार थियो जुन तिनीहरूलाई उपयुक्त शिक्षकहरूलाई मदत गरेर विदेशी भाषाहरू पढ्ने अभ्यासको समस्या समाधान गर्नेछ।
सायद अन्तर्राष्ट्रिय संचारको सबैभन्दा लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी हो। तथ्याङ्कहरूको अनुसार, विदेशी भाषाहरूको विद्यार्थीहरूको कुल संख्याको 80% भन्दा बढी (1.5 बिलियन) अंग्रेजी अध्ययन र लगभग सबैलाई भाषा अभ्यास चाहिन्छ।
हामी धेरै देशी अंग्रेजी वक्ताहरू कहाँ पाउन सक्छौं?
देशी वक्ताहरूले हामीलाई कसरी संवाद गर्न आवश्यक छ?
पहिलो, अनलाइन पैसा कमाने मौका। विश्वभरका लाखौं मानिसहरू आफ्नै भाषामा संचार गरेरर्फत पैसा कमाउन तयार छन्।
दोस्रो, धेरै देशी अंग्रेजी स्पिकरहरू पनि विदेशी भाषाहरू पढ्छन् र तिनीहरू अध्ययन गरिरहेका विदेशी भाषामा भाषा अभ्यास चाहिन्छ। तिनीहरूमध्ये धेरै बोल्ने भाषा जान्न चाहन्छन्। यसकारण, तपाईं एकअर्कालाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, गतिविधिहरू गरेर 30 मिनेट खर्च गरेर तपाईंको भाषामा भाषामा सञ्चार गर्न 30 मिनेटको संचारमा तपाईंले भाषा सिक्नु भएको कुराको बारेमा।
तेस्रो, विश्वभरको ठूलो संख्यामा अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता छ र अन्य विषयहरूमा शिक्षकहरूको खोजी गर्दैछ। उदाहरणका लागि - गणित, सङ्गीत, राष्ट्रिय व्यंजनहरू, सही विज्ञान, लेखांकन, प्रोग्रामिंग, डिजाइन आदि। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै व्यक्तिगत कुञ्जी र प्रतिभा छ। के हो यदि तपाईलाई कसैलाई भाषा सिकाउँदै शिक्षा सिकाउने थियो भने, एकै समयमा केहि सिकाइरहेको बेला। उदाहरणका लागि: जेसिका एक सानो अमेरिकी शहरमा बस्छ र गणित शिक्षक चाहिन्छ, तर उनीसँग पैसा छैन र उनीहरूको दाहिने शिक्षक खोज्न निकै गाह्रो छ। सौभाग्य देखि, जेसिकाको लागी, तपाईं गणित राम्रोसँग जान्नुहुन्छ र तपाईलाई एक अंग्रेजी स्पिकर खोज्नु पर्दछ, तर तपाईं रूसमा बस्नुहुन्छ। हाम्रो प्लेटफार्मले तपाईंलाई एकअर्कालाई परिचय दिनेछ र यसरी तपाईं आफ्नो ज्ञान साझेदारी गर्दा निःशुल्क सिक्न सक्षम हुनुहुनेछ, भलेपनि तपाईं पृथ्वीको विपरीत पक्षमा बाँच्न सक्नुहुनेछ।
यसबाहेक, कुराकानी वा भिडिओनाइन्टिभको समयमा हाम्रो प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्दै, तपाइँ चाँडै नयाँ शब्दहरू र वाक्यहरूसँग भाषा कार्डहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तुरुन्तै पछिको स्मरणको लागि तपाइँको क्लाउड स्टोरेजमा जानुहुन्छ र हाम्रो सबै उपकरणहरूसँग प्रयोग गर्नेछ।
यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्लेटफार्म कुनै पनि अनुशासनमा मापन गर्न सक्छ र हामीसँग विश्वभरको ठूलो संख्यामा मद्दत गर्न मौका छ।
भाषा सिक्न उत्तम तरिका भनेको भाषा वातावरणमा पूर्णतया विपरित छ, त्यसैले हामी कुनै पनि देशमा आवास खोज्न सम्भावना कोठामार्फत कुराकानी गर्न साथै साथै भाषा स्कूलहरु र कक्षाहरु मा कक्षाहरू खोज गर्ने क्षमताको साथ उपकरणहरू विकास गर्न योजना बनाउँदछ। यात्रा।
पहिलो नजरमा, हाम्रो विचार धेरैलाई अवास्तविक लाग्न सक्छ, तर विश्वभरको ठूलो संख्यामा सूचनाको सही कार्यान्वयन र रिपोर्टिंगको साथ यो स्पष्ट छ कि यो काम गर्नेछ।
यदि तपाईंसँग हाम्रो प्लेटफर्मको विकासमा रोचक विचारहरू छन् वा तपाईं हाम्रो परियोजनामा ​​भाग लिन चाहानुहुन्छ - हामीलाई कुनै पनि समयमा लेख्नुहोस्।